Alarobia Amboniloha: taxi-be tapaka hisatra tampoka, olona telo naratra mafy | NewsMada
Alarobia Amboniloha: taxi-be tapaka hisatra tampoka, olona telo naratra mafy
Tsy tafajanona io fiara io raha tsy tafakatra tamin’ny sisin-dalana ary nivadika. Vokatr’izay, olona telo naratra mafy ka anisan’izany ny ankizy vao enin-taona monja. Torana tsy nahesika sady tapa-tanana koa ny mpamilin’ilay taxi-be. Nilaza ny mpandeha sy ny nahita ity loza ity fa efa tsy nilamina loatra ilay fiara talohan’izao. Somary nandeha mafy ihany koa ka rehefa sendra ny lalana midina iny Amboniloha iny, tsy tafajanona intsony. Raha tsy nivadika ilay fiara, mety ho nifatratra tamin’ny fiara hafa, na tranon’olona, na koa ireo mpandeha tamin’ny sisin-dalana. Niezaka niala ihany ny mpamily, saingy anisan’ny voa mafy tamin’ny loza koa izy. Nifamonjen’ny olona teny an-toerana nentina tany amin’ny hopitaly ireo naratra. Tonga teny an-toerana ny polisy nanao ny famotorana.
Maro ny olona nimenomenona amin’ny afitsoky ny taxi-be. Mampiseho ihany koa ity loza ity fa ireo fiara efa somary tranainy ity nitera-doza ity. « Efa ratsy tanteraka ny fiara ka tsy mahagaga raha misy ny olana mekanika », hoy mpandeha. Firifiry ireo fiara taxi-be ny efa tsy tokony hiasa intsony? Maloto, rovitra ny seza, efa mihozongozona avokoa ny zavatra rehetra ao anatiny. «Mendrika ny hampiakatra ny saran-dalana ve ireo taxi-be raha izao ny tolotra avy aminy ? », hoy ny olona nahita ny loza.
Rehefa hampiakatra saran-dalana ihany tokoa, iza ny tompon’andraikitra afaka hanara-maso ny fiara miasa mitatitra olona eto an-dRenivohitra? Mandeha ho azy ny zava-drehetra kanefa ain’olona no lalaovina amin’izany. Andrasana izay mety ho tohin’ny tranga toy izao.